Ozi - HMB 2020 Team Buliding Ọrụ
Yantai Jiwei 2020 (Oge ọkọchị) "Njikọ, Nkwukọrịta, Nkwado" Otu Ndị Na-akwado Ọrụ
Na 11th Julaị, 2020, ụlọ ọrụ mgbakwunye HMB haziri Team Buliding Active ， Ọ nwere ike ọ bụghị naanị izu ike ma mee ka ndị otu anyị dị n'otu, kamakwa mee ka onye ọ bụla n'ime anyị ghọta nke ọma ihe bụ ọnọdụ maka otu ihe ịga nke ọma. Ọ bụ ezie na mmemme ndị ahụ adịteghị aka, ha na-ewetara anyị ọtụtụ echiche, ọkachasị Otu esi jikọta ihe anyị mụtara na egwuregwu ka ọrụ bụ ajụjụ anyị kwesịrị ichebara echiche.
Ọrụ a metụtara isiokwu nke "Njikọ, Nkwukọrịta, na Mmekọrịta", nke ebumnuche iji zụlite njikọta ndị otu na ndị ọrụ yana ike zuru oke nke etiti. Ọrụ a na-enyere ndị otu mgbakwunye HMB aka iwusi nkwukọrịta ike na imekọ ihe ọnụ n'etiti ndị ọrụ HMB niile. Ọrụ a gụnyere njem nlegharị anya na egwuregwu Counter-Strike.
N'oge njem ahụ, anyị gara ileta ndị njem nleta ama ama na Yantai nke akpọrọ "WURAN" temple. Ndị ọrụ HMB niile nwere ọmarịcha ugwu na nlele mmiri, ma were ezumike maka ahụ na uche na ọrụ na ndụ na-arụsi ọrụ ike, nke na-atọ ọ extremelyụ oke.
Mgbe ị na-egwu egwuregwu Counter-Strike, onye ọ bụla mere nke ọma, ndị otu ahụ jikọrọ ibe ha, nakweere usoro mgbanwe, nyere ibe ha aka, wee melite ikike ọgụ nke ndị otu niile. N'ọtụtụ ọnọdụ, ezughị ezu ịdabere nanị n'ike nke aka anyị. Imekọ ihe ọnụ bụ akụkụ dị mkpa nke ndị otu ahụ, enwere ikike nke ọtụtụ ndị ọrụ iji meziwanye ikike ha ịnagide nsogbu. N'ihe banyere ọrụ, anyị kwesịrị ịrụ ọrụ nke onye ọ bụla n'ime anyị. Ihe anyi choro bu inweko na imeko ihe onu ma anyi nile mara na "Njiko, Nkwado, Nkwado" puru inyere anyi aka ime ihe nile kacha mma.
Ọrụ otu ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ haziri bụ ezigbo njikọ dị n'etiti ọrụ na oge ezumike. Izu ike nke ahụ na uche nwere ike ịhapụ ndị otu ka ha nwetakwuo ike ha ma tinye onwe ha n'ọrụ oge n'ọdịnihu. Yantai Jiwei Construction Machinery Equipment Co., Ltd. bụ n'ezie a nnukwu n'anya. ezinụlọ.